India, Mafotaka ny Adin’ny Tenifototra Mialoha ny Fifanandrinan’ireo Kandidà Amin’ny Fifidianana Ho An’ny Lohataona 2019 · Global Voices teny Malagasy
Niteraka onjam-panehoankevitra teny anaty Media Sosialy ity teny faneva ity
Pikantsarin'ilay vohikalan'i Nation with NaMo, izay milaza ho vondrom-piarahamonina ahitàna mpirotsaka an-tsitrapo lehibe indrindra ao India izay tafavory hanohana ny Praiminisitra Narendra Modi.
Raha tsy misy fanamarihana manokana dia mankany amin'ny tranonkala miteny anglisy avokoa ny rohy rehetra
Amin'izao fifidianana ho solombavambahoaka 2019 an'ny Lok Sabha, efa manakaiky izao, izay andrasan'ny maro fatratra ao India, manomana teny faneva mba hitaonana ny mponina alohan'ilay daty fandrotsaham-bato ny 11 ka hatramin'ny 19 Aprily ireo antoko politika. Nirona misimisy kokoa tany amin'ny filazambaovao sosialy ny fampielezankevitra tamin'ity taona ity, izay nitarika ady amin'ny tenifototra teo amin'ny praiminisitra sy ireo te-hanongana azy.
Ny taona 2014, Narendra Modi, mpitarika ny Antoko Bharatiya Janata no niaro ny teny faneva “Abki Baar Modi Sarkaar” (governemantan'i Modi ny amin'ity indray mitoraka ity). Tamin'ny fifidianana farany teo, Rahul Gandhi, Filohan'ny antoko mpanohitra Indian National Congress na ny Kongresy Nasionaly Indiana amin'izao fotoana izao, niantso an'i Narendra Modi ho ‘chowkidaar’ izay midika hoe mpanara-maso na mpiambina amin'ny teny Hindi. Avy eo dia niantso azy ho “chowkidaar chor hain“, izay midika fa ny mpiambina ihany no mpangalatra. Mba hampitsimbadihana ity fiantsoana ity, nanolotra ny teny fanevany ho an'ny taona 2019 ny antoko Bharatiya Janata – “Main Bhi Chowkidaar“. (Na dia mpiambina aza aho)
Ity teny filamatra ity dia niteraka onjam-panehoankevitra tao amin'ny Twitter sy tany amin'ireo sehatra fifanakalozankevitra. Ireo mpanohana mafana fo an'i BJP, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Bhakts, dia nanohana tanteraka ilay tenifototra– ary tonga hatrany amin'ny famokarana entam-barotra mihitsy aza.
Get your own at https://t.co/6Czw3BXYBr or on the NaMo App at https://t.co/TQbP2KsOFF pic.twitter.com/ZKbfIFIehV…………………
Miverina indray ho mpiambina i Narendra Modi (NaMo)
Maneho ny fanohanany an'i NaMo indray Inda amin'ny fanaovana ny akanjon'i Main Bhi Chowkidar !
Alaivo ny anao ao amin'ny https://t.co/6Czw3BXYBr na ao amin'ny NaMo App amin'ny https://t.co/TQbP2KsOFF pic.twitter.com/ZKbfIFIehV
Pikantsarin'ny pejy fandraisana Twitter an'ny Praiministra Indiana Narendra Modi.
Samy nanova ny anarany tao amin'ny Twitter avokoa ireo politisiana BJP, na mpiasa birao izany na ireo manampahefana notendrena, ka nanampy hoe “Chowkidaar” manoloana ny anarany avy. Nosoloin'i Praiminisitra Narendra Modi ho Chowkidaar Narendra Modi koa ny kaonty manokany Twitter. Lahatsary iray mampiseho fampielezankevitra ahitana fifangaroan'ny olona miaraka amin'ny “Main Bhi Chowkidaar Hun” (Izaho koa mba mpiambina) izay nilalao tao aoriana no navoakan'ny BJP. Nahasarika ny sain'ny olona maro sy tsikera maro ihany koa ilay lahatsary.
Nozarain'ny Praiministra ny rohy mankany amin'ireo toeram-pivarotana ny vokatra ho an'ity fampielezankevitra hafa kely ity. Tsara ny manamarika fa tokam-po amin'ny loko Safran sy ny kisarisary ilay entam-barotra, izay manampy ny fiantsoana azy ireo ho Antokon'ny Safran.
Feno ny Bhakts (mpanohana azy) ny fampielezankevitr'i Narendra Modi sy ny famoriam-bahoaka nataony tamin'ity taona 2019 ity. Famoriam-bahoaka izay mitovy amin'ny karazana fampielezankevitra ho filohampirenena izay mety ho hitanao any Etazonia (miaraka amin'ny efijery lehibe, sora-baventy misy ny teny filamatra, sy vahoaka mitondra ireo vokatra) no toa nampisongadina ny fampielezankevitr'i Modi.
India came together and said in one voice- #MainBhiChowkidar
Niara-nirohotra India ary niteny tamin'ny feo tokana – #MainBhiChowkidar.
Isaorana lehibe ianareo rehetra nandray anjara tamin'ireo programa manerana an'i India!
Ny tsodranonareo sy ny fitiavanareo dia loharanon-kery lehibe. pic.twitter.com/Z2qcB5MbRr
Tao Mumbai, nokarakaraina ihany koa ny fifaninanana mitondra fiara ho isan'ny fampielezankevitra politikan'ny BJP. Hita ho nanao ilay akanjo misy ny loko Safran sy kisarisary avokoa ireo mpandray anjara. Nanomana fifampiresahana mivantana tamin'ny alàlan'ny lahatsary ny praiminisitra Narendra Modi tao anatin'nt fandaharana ny kabariny.
Tsy tambo isaina ireo mpanaraka an'i Chowkidars maneran an'i India
Ato no ahafahanao mandray anjara amin'ny programa #MainBhiChowkidar akaiky indrindra ny toerana misy anao
Veloma vetivety ho rahariva indray ! https://t.co/87zAQ9eJN9
Mafimafy ihany koa ny fitsikerana nahazo ny fampielezankevitry ny tenifototra BJP ary namoaka ny teny filamatry ny fampielezankeviny koa ny National Congress Party na ny Antokon'ny Kongresy Nasionaly Indiana — “Main Bhi Berozgar” (izaho koa tsy an'asa) izay maneso ny teny fanevan'ny BJP. Ho fanohanana azy, nanolotra ny tenifototra “#MainBhiBerozgar” ihany koa ny Youth Wing of the Congress na ny Elatra Tanoran'ny Kongresy. Nanaraka izany ihany koa ny sasany amin'ireo manmpahefana avy amin'ny antoko INC ka nanova ny kaontiny Twitter.
Mba hanodinana ny fampielezankevitry ny BJP rehetra, nanova ny teny filamatrany ihany koa ny antoko INC saingy nitazona ilay iray hoe — “Chowkidar Chor Hain” (ilay mpiambina no mpangalatra). Tao amin'ilay lalaon'ny Ligy voalohany Indiana (Cricket) vao tsy ela izay tao Rajasthan, nanomboka nihorakoraka ity teny filamatra ity ny ampahany tamin'ireo vahoaka marobe, tahaka ireny lahatsary lasa miely be ireny . Nandritra ilay lalao nifanandrinan'ny fanjakana Rajasthan sy Punjab no nandrenesana ireo mpijery nihorakoraka ny hoe “Chowkidaar Chor Hain”. Mety tsy hahagaga ny sasany intsony izany, satria avy amin'ny antokon'ny Kongresy ny filohan'ny ministra ankehitriny avy ao amin'ny fanjakan'i Rajasthan.
Nisy namaky ny resaka.
Maresaka be eo afovoan'ilay lalao
Ny mpiambina no mpangalatra …!
Tamin'ny Aprily fankalazana ny fetin'ny lainga, nanolotra tenifototra vaovao roa ny INC – #MadiMatBanao sy # ModiDiwas – hadika amin'ny teny hoe ‘Aza atao Modi izahay’ sy ny ‘Andron'ny Modi’.
Jereo tsara ny mpiambina anao
Ireo izay tonga miaraka amin'ny fehezana famoretany
Aiza ny asa 20 tapitrisa ?
Karama avo roa heny ? Ary aiza ireo 1,5 tapitrisa (rupia indianina) ao amin'ny kaontin'ny tsirairay ?
Resaka fotsiny – inona no holazaina, inona no hohanina
Ampy izay hoy izahay #AzaAtao Modi (izahay)
Fandraisana anay ho adala izany
Paikady hafa ampiasain'ireo antoko roa ireo ny manendry olo-malaza avy amin'ny sehatry ny horonantsary sy ny fahitalavitra. Io no iray amin'ireo tetikady tranainy indrindra amin'ny politika indiana sy tamin'ity indray mitoraka ity — io no hianteheran'izy ireo.
Nanomboka nametraka ny antotan-taratasy firotsahany hofidiana ireo mpifaninana avy amin'ny antoko politika ao amin'ny fari-piadidian'i Lok Sabha.
Mandritra izany fotoana izany, nisy ireo hafa nanakiana ity tetikady ity niaraka tamin'ireo mpanao hatsikana izay namely mivantana ny teny filamatry ny BJP sy ireo lahatsoratra, tamin'ny fanontaniana raha mendrika ny ho antsoina hoe mpiambina ny firenena ireo mpikambana rehetra ao amin'io antoko politika io. Mivantana be ireo mpanao hatsikana nitsikera ny antokon'ny fitondrana, ary mbola nanohy ny hafanampony hatrany hatramin'ny nampirehidrehitra ny fampielezankevitra 2019.
Naniry ny haka fotoana kely mihitsy i Hasan hamaliana ireo fanontaniana mikasika ny fampiasan'ny Patriot Act feom-pihomehezana efa noraketina mialoha na tsia. https://t.co/rQmxwkIj7l pic.twitter.com/acsKhVLohU
Fotoana fohy sisa alohan'ny anombohan'ny Modiji hivarotra ao amin'ny bookmyshow ny tapakila mikasika ny famoriambahoaka ataony ho amin'ny fifidianana … https://t.co/a1w5xWuQ8K
Handalo fitsapana avokoa izany tantara rehetra izany satria hanao fifidianana ilay demokrasia goavana indrindra eto an-tany ny 11 Aprily ka hatramin'ny 19 Aprily 2019.
9 ora izayIndia